I-Radicle, ipulatifomu yentuthuko ebambisene ngokubambisana | Kusuka kuLinux
Muva nje ukukhishwa kwenguqulo yokuqala ye-beta yesikhulumi seRadicle P2P kumenyezelwe neklayenti layo ledeskithophu iRadicle Upstream.
Le phrojekthi ihlose ukwakha insizakalo esezingeni eliphansi yokuthuthukiswa kokubambisana kanye nokugcinwa kwekhodi, efana neGitHub neGitLab, kepha engaboshiwe kumaseva athile, kanye nokungathobeli ukucwaningwa nokusebenza nezinsizakusebenza zabahlanganyeli benethiwekhi ye-P2P.
I-Radicle ivumela ukungathembeli kuzingxenyekazi nezinkampani ezizimele ekwakhiweni komthombo ovulekile nokusatshalaliswa, lapho ukuxhumana kuletha khona ubungozi obengeziwe (iphuzu elilodwa lokwehluleka, inkampani ingavala noma iguqule izimo zokusebenza).
Ukuphatha ikhodi ku-Radicle kusetshenziswa iGit eyaziwayo, kunwetshwe ngokuchazwa kwamakhosombe kwinethiwekhi ye-P2P. Wonke umuntu idatha igcinwa kakhulu endaweni futhi zihlala zitholakala kwikhompyutha yonjiniyela, ngaphandle kwesimo sokuxhumeka kwenethiwekhi. Ukuvikela imininingwane, kusetshenziswa i-cryptography ngokususelwa kukhiye womphakathi, ngaphandle kokusebenzisa ama-akhawunti. Uhlu lwezinqolobane zabahlanganyeli zenethiwekhi ye-P2P lungabonakala kunodi yenzalo yephrojekthi.
Enhliziyweni yenethiwekhi ye-P2P yifayela le- I-Git-based Radicle Link protocol ephindaphinda idatha phakathi kwabahlanganyeli. Ababambiqhaza banikela ngokufinyelela kukhodi yabo nakwikhodi yamaphrojekthi abathandayo, amakhophi awo angaphezulu agcinwa endaweni futhi aphindaphindwe ezinhlelweni zabanye onjiniyela abanentshisekelo. Ngenxa yalokhu, kwakhiwa indawo yokugcina amandla esezingeni lomhlaba yeGit, idatha yayo ephindaphindwayo futhi ephindwe kabili kumasistimu ahlukene ababambiqhaza.
Iphrothokholi isekela izinhlobo ezimbili zezinto zokuhlonza: umhlanganyeli kanye nephrojekthi. Umbambiqhaza uthinta umuntu owethule le node kunethiwekhi ye-P2P (isigaba) futhi iphrojekthi ichaza indawo yokugcina lapho ababambiqhaza abaningi bengasebenza khona.
Inethiwekhi yakha isithombe sokuxhumana phakathi kwabahlanganyeli namaphrojekthi: Abahlanganyeli bagcina umkhondo wamaphrojekthi abathandayo nabanye ababambiqhaza. Izinto ezivela kubahlanganyeli abalandelwayo zenziwa zitholakale kwabanye ababambiqhaza abalandela umhlanganyeli wamanje.
Intuthuko yenzeka ngesitayela se- "bazaar" kunokuba igcinwe i-canonical master view ku-Radicle, kunamagatsha amaningana afanayo nabanakekeli bawo nabanikeli abeshintshana ngeziqephu.
Esikhundleni sokuxhuma endaweni yokugcina izinto ireferensi yangaphandle, I-Radicle isuselwa endaweni yokugcina ehlukile emshinini wendawo wonjiniyela ngamunyer, lapho ungadonsa khona ushintsho kusuka ezinqolobaneni zabanikeli abalandelwayo bese uthumela izinguquko zakho ezinqolobaneni zabanikeli bokulandela.
Ngokomqondo, iphrojekthi iba iqoqo lokubukwa kwekhodi ezinhlelweni zabo bonke ababambiqhaza entuthukweni. Ngokwenzayo, isigaba sokulethwa kwezinguquko sihlelwe ngokuya ngochungechunge lokuthembana: ukuthola izinguquko kwikhophi labo lasendaweni lokugcina, unjiniyela unezela abanye abathuthukisi njengemithombo (ekude), eyenza ngokuzenzakalela ukubhalisa kokusha okwenziwayo Lokho kuvela ezinqolobaneni zabo. Zonke izinguquko kunethiwekhi ye-P2P zisayinwe ngamadijithi futhi zingaqinisekiswa ngabanye abahlanganyeli.
Indlela elula yokuxhuma kunethiwekhi ukufaka uhlelo lokusebenza lwedeskithophu I-Radicle Upstream, ekuvumela ukuthi udale okhiye bokukhomba ilungu elisha, ukusingatha ikhodi yakho, nokuxhumana nabanye onjiniyela.
Okwamanje, ukuqaliswa kukhawulelwe ekusebenzeni ngokuhlanganyela kukhodi nokulandela uhlelo lwe-bugKepha ngokuzayo bahlela ukukhulisa amathuluzi wokuhlela izingxoxo nokubuyekeza izinguquko, kanye nokusebenzisa ukwesekwa kwamakhosombe azimele ngokufinyelela okusekelwe ekubethelweni kokuphela kokuphela.
Ekugcineni, uma unesifiso sokwazi okwengeziwe ngakho, ungabheka isixhumanisi esilandelayo.
Ikhodi ye-proxy yokusebenza kwe-node ibhalwe ku-Rust, kuklayenti lokuqhafaza ku-TypeScript, Svelte naku-Electron. Ukuthuthuka kwephrojekthi Zisatshalaliswa ngaphansi kwelayisense le-GPLv3.
Amaphakeji alungele i-Linux (AppImage) ne-macOS.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Kunconyiwe » I-Radicle, ipulatifomu yentuthuko ebambisene ngokuhlanganyela
ICentOS 8.3 isivele ikhishiwe futhi umsunguli weCentOS waqala ukwakhiwa kweRocky Linux